कलेज खर्च जुटाउन सुन तस्करीमा, प्रतिकिलो ५० हजार पाउने प्रलोभनमा फसे ! « News24 : Premium News Channel
कलेज खर्च जुटाउन सुन तस्करीमा, प्रतिकिलो ५० हजार पाउने प्रलोभनमा फसे !
काठमाडौं । त्रिभूवन विमानस्थलबाट हुँदै आएको सुन तस्करी केरङ–रसुवागढी नाकातर्फ सरेको छ । असोज लागेयता सो नाकाबाट भित्र्याइएको आठ किलो अवैध सुन सुराकीको आधारमा प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरीको आँखा छलेर भित्र्याइएको त कति होला कति ! सुन ओसार्न तस्कर समूहले प्रलोभनमा पारेर विद्यार्थीलाई समेत प्रयोग गर्न थालेको तथ्य खुलेको छ ।
यिनी रसुवा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका–९ थमानका सोबहादुर तामाङ । उमेर १७ वर्ष । काठमाडौं सामाखुसीको एक विद्यालयमा १२ कक्षामा पढ्ने सोबबहादुर मंगलबार रसुवाबाट अवैध सुन ल्याउँदै गर्दा पक्राउ परे, तार्केश्वर नगरपालिकाको तीनपिप्लेबाट ।
बिदाको बेला घर गइरहने सोबबहादुरको छिमेकीका कारण चिनियाँ व्यापारीसँग सम्बन्ध बढ्यो । व्यापारीले एक पटकको कामबाट कलेजको शुल्कदेखि अन्य दैनिक खर्च गर्न पुग्ने पैसा दिने प्रस्ताव गरे । राम्रो पैसा आउने भएपछि यिनी तस्करीको सुन बोक्न राजी भए । मंगलवार कम्मरमा लगाएको पेटी र जुत्तामा सुनका डल्ला कोचेर यिनी सार्वजनिक बसमा रसुवाबाट काठमाडौं आउँदै थिए । तर, सुराकीका आधारमा प्रहरीले साँझ साढे सात बजे यिनलाई नियन्त्रणमा लियो ।
प्रहरीका अनुसार वीच्याटमा दिइएको सम्पर्क व्यक्तिको आधारमा सोबबहादुर बौद्ध पु¥याएर सुन हस्तान्तरण गर्ने योजनमा थिए, प्रति किलो बराबर पचास हजार लिएर । सोबबहादुरले पहिलो पटक सुन बोकेको बताएका छन् । तर, प्रहरी पहिलो पटकमै साढे दुई करोड बराबरको पाँच किलो सुन कसैले यिनको जिम्मा लगायो भन्नेमा विश्वस्त छैन ।
विमानस्थलबाट हुने तस्करी ‘लगभग’ रोकिएपछि तस्कर केरुङ–रसुवागढी नाकामा सक्रिय भएको प्रहरीको बुझाई छ । हुन पनि असोज लागेयता प्रहरीले रसुवा हुँदै ल्याउन लागिएको आठ किलो सुन बरामद गरिसकेको छ । प्रहरीले असोज ८ गते टोखाबाट ३ किलो सुनसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।